Lioka 20 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Nosoratan’i Lioka 20:1-47
Avy amin’iza ny fahefan’i Jesosy? (1-8)
Fanoharana momba an’ireo mpamboly namono olona (9-19)
Andriamanitra sy Kaisara (20-26)
Fanontaniana momba ny fitsanganana amin’ny maty (27-40)
Zanak’i Davida ve i Kristy? (41-44)
Mitandrema amin’ny mpanora-dalàna (45-47)
20 Indray andro, raha mbola nampianatra olona tao amin’ny tempoly i Jesosy, sady nitory ny vaovao tsara, dia nanatona azy ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny anti-panahy, 2 ka niteny taminy hoe: “Lazao aminay hoe fahefana avy aiza no anaovanao an’izao? Ary iza no nanome anao an’izany fahefana izany?”+ 3 Dia namaly izy hoe: “Izaho koa mba hanontany anareo ka valio: 4 Avy any an-danitra sa avy amin’ny olona no nahazoan’i Jaona fahefana hanao batisa?” 5 Dia niara-nidinika izy ireo hoe: “Raha miteny izao isika hoe: ‘Avy any an-danitra’, dia hilaza izy hoe: ‘Koa naninona ianareo no tsy nino azy?’ 6 Raha miteny anefa isika hoe: ‘Avy amin’ny olona’, dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra, satria resy lahatra ry zareo fa mpaminany i Jaona.”+ 7 Koa namaly izy ireo hoe tsy fantany na avy aiza na avy aiza. 8 Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa tsy hiteny aminareo hoe fahefana avy aiza no anaovako an’izao.” 9 Nilaza an’izao fanoharana izao tamin’ny vahoaka izy avy eo: “Nanao tanimboaloboka+ ny lehilahy iray, ary nampanofainy tamin’ny mpamboly ilay izy. Dia lasa nankany an-tany hafa izy ary naharitra ela be tany.+ 10 Rehefa tonga ny fotoam-piotazana, dia naniraka mpanompo ho any amin’ny mpamboly izy mba haka amin’ny vokatry ny tanimboaloboka. Nalefan’izy ireo nody maina anefa ilay mpanompo, rehefa avy nokapohiny.+ 11 Dia naniraka mpanompo hafa indray ilay lehilahy. Nokapohin’izy ireo koa izy io sady nalany baraka* ary nalefany nody maina. 12 Mbola naniraka mpanompo fahatelo izy, nefa nataon’izy ireo naratra sy noroahiny koa izy io. 13 Dia hoy ilay tompon’ny tanimboaloboka: ‘Inona re no hataoko e? Haniraka ny zanako malalako+ aho. Angamba mba hohajain’izy ireo izy.’ 14 Rehefa nahita azy ny mpamboly, dia nifampiresaka hoe: ‘Iny ny mpandova! Andao izy hovonointsika, dia amin’izay lasantsika ny lova!’ 15 Koa notaritaritin’izy ireo teny ivelan’ny tanimboaloboka izy, dia novonoiny ho faty.+ Inona àry no hataon’ilay tompon’ny tanimboaloboka amin’izy ireo? 16 Ho avy izy dia hovonoiny ho faty ireo mpamboly ireo, ary homeny olon-kafa ny tanimboaloboka.” Dia hoy izy ireo rehefa naheno an’izany: “Enga anie mba tsy hisy izany!” 17 Fa nijery tsara azy ireo i Jesosy sady niteny hoe: “Koa inona àry no dikan’ilay voasoratra hoe: ‘Ny vato tsy tian’ny* mpanao trano no lasa vato fehizoro lehibe indrindra’?*+ 18 Ho potipotika izay rehetra mianjera eo amin’izany vato izany,+ ary ho torotoro izay ianjerany.” 19 Tamin’izay ora izay indrindra, dia nitady hisambotra azy ny mpanora-dalàna sy ny lehiben’ny mpisorona, satria takany fa izy ireo no tao an-tsain’i Jesosy tamin’io fanoharana io. Natahotra ny vahoaka anefa izy ireo.+ 20 Nanara-maso akaiky an’i Jesosy àry izy ireo, ary naniraka olona, izay nokaramainy mangingina hiseho ho olo-marina, mba hamandrika an’i Jesosy amin’ny teniny.+ Amin’izay izy ireo ho afaka hanolotra azy amin’ny mpitondra sy ny governora.* 21 Ary nanontany an’i Jesosy izy ireo hoe: “Mpampianatra ô, fantatray fa marina ny teninao sy ny fampianaranao, ary tsy mijery tavan’olona* ianao, fa marina ny fampianaranao momba an’Andriamanitra. 22 Azonay atao* ve sa tsia ny mandoa hetra amin’i Kaisara?” 23 Takatr’i Jesosy anefa fa fetsy ratsy izy ireo, ka hoy izy taminy: 24 “Ampisehoy denaria* iray aho. Sarin’iza io eo io, dia anaran’iza io?” Hoy izy ireo: “An’i Kaisara.” 25 Dia hoy izy: “Noho izany àry, dia aloavy amin’i Kaisara izay an’i Kaisara,+ fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”+ 26 Koa tsy afaka namandrika azy tamin’ny teniny teo anatrehan’ny olona izy ireo, fa kepoka tsy nahateny satria gaga tamin’ny valin-teniny. 27 Nanatona azy anefa ny sasany tamin’ny Sadoseo, izay milaza fa tsy misy fitsanganan’ny maty.+ Nanontanian’izy ireo izy hoe:+ 28 “Mpampianatra ô, nanoratra ho antsika i Mosesy hoe: ‘Raha maty ny lehilahy iray ka namela vady nefa tsy niteraka, dia tokony hampakatra an’ilay vady navelany ny rahalahiny, ka hanome taranaka ho an’ilay rahalahiny efa maty.’+ 29 Nisy fito mirahalahy àry. Nanambady ilay voalohany, nefa maty tsy niteraka. 30 Ary maty koa ny faharoa, 31 ka nampakatra an’ilay vehivavy ny fahatelo. Hoatr’izany daholo no nataon’izy fito. Samy maty tsy niteraka izy ireo. 32 Maty koa ilay vehivavy tamin’ny farany. 33 Koa rehefa atsangana ny maty, ho vadin’iza ilay vehivavy? Efa samy nanambady azy daholo mantsy izy fito mirahalahy.” 34 Hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Ny zanak’izao tontolo izao* no mampaka-bady sy avoaka hampakarina. 35 Fa tsy hampaka-bady na havoaka hampakarina+ kosa izay hita hoe mendrika ny hiaina ao amin’ilay tontolo ho avy sy mendrika ny hatsangana amin’ny maty. 36 Tsy mety maty intsony izy ireo fa hitovy amin’ny anjely, ary zanak’Andriamanitra izy ireo satria zanaky ny fitsanganana amin’ny maty. 37 Fa na i Mosesy aza nampahafantatra hoe hatsangana ny maty, tao amin’ny fitantarana momba an’ilay voarointsilo, rehefa niantso an’i Jehovah* hoe ‘Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’i Isaka ary Andriamanitr’i Jakoba.’+ 38 Tsy mba Andriamanitry ny maty izy, fa an’ny velona satria aminy dia velona daholo izy rehetra ireo.”+ 39 Hoy àry ny mpanora-dalàna sasany: “Mpampianatra ô, marina ny teninao.” 40 Ary tsy sahy nanontany azy intsony izy ireo. 41 Fa nanontany azy ireo kosa i Jesosy hoe: “Maninona no lazain’ny olona fa zanak’i Davida i Kristy?+ 42 I Davida mihitsy mantsy no milaza ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe: ‘Hoy i Jehovah* tamin’ny Tompoko: “Mipetraha eto ankavanako 43 mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.”’+ 44 I Davida aza niantso azy hoe ‘Tompo’, dia ahoana no maha zanany azy?” 45 Ary hoy izy tamin’ny mpianany, raha mbola nihaino azy ny vahoaka rehetra: 46 “Mitandrema amin’ny mpanora-dalàna, izay tia mandehandeha manao akanjo lava. Tiany koa ny hoarahabaina eny an-tsena, ary hahazo ny toerana eny aloha* ao amin’ny synagoga sy ny toerana mihaja indrindra any amin’ny sakafo hariva.+ 47 Taperin’izy ireny ny fananan’ny* mpitondratena, ary manao vavaka lava be izy ireny mba hisehosehoana fotsiny. Hahazo fanamelohana henjana* kokoa izy ireny.”
^ Na: “naetriny.”
^ Na: “vato nolavin’ny.”
^ Abt: “lasa lohan’ny zoro.”
^ Abt: “amin’ny fahefan’ny governora.”
^ Na: “tsy manavakavaka.”
^ Na: “Mety.”
^ Jereo F.F. B14.
^ Na: “zanak’izao vanim-potoana izao.” Jereo F.T. “Izao tontolo izao.”
^ Na: “toerana tsara indrindra.”
^ Abt: “Arapak’izy ireny ny tranon’ny.”
^ Na: “mavesatra.”